रकुवा, नवल परासी
गाउँले आफै मिलेर सहकारी खोली त्यसबाट गरीबी हटाउनुपर्नेमा रकुवामा भने गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा खुलेको सहकारी संस्था पनि लथालिङ्ग भएको छ। रकुवामा केही वर्ष अगाडि खुलेको कालीगण्डकी सहकारीको रकम त हिनामिना भएको छदैंछ, संस्थाको दर्ता खारेजी पनि भइसकेको पत्ता लागेको छ।
१३ वर्ष अगाडी एक्सन एड नेपालले गरीब निवारण कार्यक्रम अर्न्तगत रकुवाका अति न्यून आय भएकाहरुको समूह बनाई पशुपालन गर्न केही रुँपैया अनुदान दिएको थियो।
पछि, हिमालयन सामुदायिक विकास मञ्च हिकोडेफले सो रकम लथालिङ्ग नहोस् र गरीव जनताले सहकारी मार्फत उपभोग्य वस्तु सरल, सहज रुपले पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ रकुवामा काली गण्डकी बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता गर्नमा सहयोग गर्‍यो।
तर, हिकोडेफ यस क्षेत्रबाट बाहिरिए पछि सहकारीका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै सहकारी प्रति ध्यान नदिंदा र हिसाब किताब पारदर्शी नगर्दा काली गण्डकी सहकारी संस्थाको रकम र नाम निसाना दुबै हराएको छ।
संस्था दर्ता भएकै वर्षदेखि सहकारीको साधारण सभा र बैठक भएका छैनन्। यसबाहेक सहरकारीको आय-व्ययको विवरण र संस्थाको गतिविधी अहिलेसम्म सार्वजनीक गरिएको छैन।
जिल्ला सहकारी कार्यालय नवलपरासीले रकुवाको कालीगण्डकी सहकारी संस्था दर्ता भए पनि त्यस्ले वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएकाले संस्था खारेज भइसकेको र रकुवामा अन्य कुनै पनि सहकारी संस्था दर्ता नभएको जानकारी दिएको छ।
जिल्ला सहकारी कार्यालयका नायव सुब्बा विमल आचार्यले सेयर सदस्यहरुको सहमति बेगर सहकारी संस्था बन्द गरिएको भए सेयर सदस्यहरुले कार्यसमितिका पदाधिकारी विरुद्ध स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दिन सक्ने बताउनुभयो। संस्था बन्द भए पनि कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुले सहकारीका सबै सेयर सदस्यहरुलाई जम्मा भएको रकम वितरण गर्नुपर्ने जानकारी आचार्यले दिनुभयो।
सहकारीका संस्थाको पदाधिकारीमा रहेर काम गरेका धर्म थापा, राजेन्द्र पराजुली, दुर्गा विरकट्टा, मेघनाथ पाण्डे लगायतकाहरुले भने यस बारेमा प्रष्ट पार्न चाहनुभएन। उता, संस्था गठन र दर्ता गर्ने समयमा योगदान गरेकी हिकोडेफकी तत्कालिन कर्मचारी कमला ठाडाले भने रकुवाका केही टाठाबाठाले रकम हिनामीना गरी संस्था डुबाएको बताउनुभयो। गरिव एवं न्यून आयस्रोत भएका सोझा गाउँलेको लागि स्थापना भएको सहकारी संस्थाको रकम हिनामीना पार्नेलाई सबै मिलेर खोज्नुपर्ने होइन?
वीरबहादुर बी. सी.
गाउँ विकास समितिको लगानीमा रकुवा गा.वि.स.ले नेपाल टेलिकम तनहुँ मार्फत आठ वर्ष अगाडि जोडेको भी एच एफ फोन कहाँ पुग्यो, अहिले धेरैलाई जानकारी छैन ।
रकुवा ६ का मेघनाथ पाण्डेको घरमा सोलार प्यानल र फोन सेट जोडी उहाँले ०६५-५२९३७४ नम्बरको फोन संचालन गर्नुभएको थियो। त्यति वेला अहिले जस्तो सी डिए एम ए फोन र मोवाईल नभएकाले तनहुँको घिरिङ्ग सुन्धारा गजरकोट, पाल्पाको वाकामलाङ्ग साथै नवलपरासीको रुचाङ्ग, नरम र डेढगाउँबासीले पनि त्यस फोनबाट फाइदा लिएका थिए। स्वदेश तथा विदेशमा वस्ने आफन्तलाई फोन गर्न आउनेको भिड हुन्थ्यो।
फोन गर्न पाल्पाको रामपुर, तनहुँको भिमाद र नवलपरासीको कावासोती जान नपर्ने हुँदा समय र पैसाको भार कम भएको भन्दै गाउँलेहरुले प्रति मिनेट ८० देखी १६० रुपैयाँसम्म शुल्क तिरेर विदेशमा फोन गर्दथे।
तर, टेलिकमलाई तिर्नु पर्ने शुल्क समयमै नवुझाँउदा रकुवाको फोन लाइन काटियो र अहिले पनि त्यो नम्बरमा फोन गर्दा फोन मात्र जान्छ, कसैले उठाउँदैन।
अहिले आएर केही व्यक्तिले उक्त फोनको कुरा गरे पनि फोन सेट, सोलार प्यानल र अन्य सामाग्री कहाँ कसरी छ भन्ने विषयमा गाविस कार्यालयले समेत सोधखोज गरेको पाइएको छैन। सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य भएकाले सम्वन्धित पक्षले यस्ता विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
दशैंको टिकापछि बालीघाट पुग्दा पनि काली नदीको भेल तेज नै थियो। चाडबाडको बेला नहुँदो हो त नाङेटारका हेम बहादुर कुमाल डुँगा लिएर काली नदिको बढ्दो भेलसँग पौठेजोरी खेल्ने थिएनन्। हुन त दशैंको पूर्णिमा सम्म कुमालको घरमा टिका टालो गर्न आउने आफन्तहरुको भिड नै थियो। तर, कुमाल भने दशैंका लागि भन्दै सप्तमी देखि खोलेको घाटमा सिमलको डुँगा लिएर बटुवाहरुलाई वारपार गराइरहेका थिए।
एकाविहानै, चार बटुको जाँड पिएर हेमबहादुर काली तिरमा आइपुग्दा चार पाँच जना बटुवाहरु घटुवारे कुरेर बसिरहेका थिए। हेमबहादुरले उर्लदों नदीमा एक्लै डुँगा हाल्ने साहस गरेनन्। उनीसँगै बालीघाटमा डुँगा चलाउने ठेक्का पाएका आँपटारीका रुमलाल पुलामी दशैं मै व्यस्त थिए। हेमबहादुरले डुँगा चलाउन पौडी खेल्न गएका तिरन्दीका एक युवाको सहयोग मागे र दुई जना भएर चार जना मात्र बटुवा राखी बालीघाटमा डुँगा ठेले।
नाङेटार पट्टिबाट डेढगाउँ तर्फ डुँगा तार्दा त्यति अप्ठेरो थिएन। तर, डेढगाउँबाट तार्दा भने छाल डुँगामा पसेको प्रष्ट देखिन्थ्यो। त्यसैले पनि हेमबहादुर भन्दै थिए, "एक पटकमा चार जना भन्दा धेरै जना डुँगामा चढ्न मिल्दैन।" हेमबहादुरले हिउँदमा एकपटकमा १२ जनासम्म बटुवा यही डुँगाबाट तार्छन्।
हेमबहादुर र रुमलालले दुई वर्षका लागि २८ हजार रुपैया तिरेर पोहोर बालीघाटमा डुँगा चलाउने ठेक्का पारेका हुन्। उनीहरुले दिएको पैसा डेढगाउँको रानीबेल स्कूल र तनहुँ गड्यौंली स्कूललाई चौध चौध हजार रुपैया बाँडिन्छ। डुँगा बनाउनका लागि अग्लो सीमल खोज्नुपर्ने र त्यसलाई करिब १५ हजार रुपैया खर्च गरेर खोप्नु पर्ने हेमबहादुर बताउँछन्। "डुँगा बनाउनमा दरै जातिको सहयोग लिनुपर्छ हामी कुमालको ढङ्गै पुग्दैन" हेमबहादुर भने। डुँगा चलाउने ठेक्का डेढगाउँलेले नलिएर सँधै तनहुँकाले मात्र लिने गरेकोमा हेमवहादुरलाई अचम्म लागेकोछ।
एक पटक बनाइएको डुँगा २ वर्षभन्दा बढी खप्दैन । दुई वर्ष अघिसम्म एकै पटकमा ३० जना सम्म पनि बसेर तर्न मिल्ने डुँगा बालीघाटमा थियो।
डुँगा तारे वापत स्थानीय गाउँलेको एक परिवारले वर्षको एकपटक ठेकदारलाई तीन पाथी धान वा दुई पाथी कोदो, मकै अथवा गहुँ दिनुपर्छ। पैसा दिने भए वर्षको एकपटक एक सय पचास रुपैया तिर्नुपर्छ। बाली नतिर्ने बटुवालाई तारे वापत घटुवारेले वर्षमा दश रुपैया र हिउँदमा पाँच रुपैया लिने गर्छन्।
हुन त हेमबहादुरको जीविकोपार्जनको मेसो नै यही डुँगा हो। तर, उनलाई जति सक्दो छिटो बालीघाटमा पुल बनेर डुँगा चलाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने छ। रकुवाको साँघुरीघाटमा पुल बनेकोमा चित्त नबुझाएका हेमबहादुर भन्छन्, "पुलको लागि भनेर टुकराज सिग्देललाई सांसद बनाइयो, प्रचार पनि भयो, तर ठाउँमा बोल्ने मान्छे नभए पछि हामी कुमालले भनेका ठाउँमा पुल बनेन।"
डेढगाउँ वहुउद्देश्यिय सहकारी संस्थाको पाँचौ साधारणसभाले गम्मर सिंह खम्चाहाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको छ। नव निर्वाचित संचालक समितिमा ९ जना पदाधिकारी रहेका छन्। साधारण सभाले संचालक समिति बाहेक आगामी ३ वर्षका लागि लेखा र ऋण उप समितिको पनि सर्वसम्मतिले चयन गरेको छ।
लेखा समितिको संयोजकमा अम्मर बहादुर दराई र ऋण उपसमितिको संयोजकमा सिद्धिपूर्णी दराई हुनुहुन्छ। असोजको दोस्रो साता डेढगाउँ उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भएको साधारण सभाले विगतमा गरीब समुहको सदस्य रहेको तर विविध कारणले सहकारीको सदस्यता प्राप्त नगरेका ब्यक्तिलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरी विगतमा एक घरका १ जनालाई मात्र संस्थाको सदस्यता दिइने भए पनि अब छुट्टा भिन्न भएको अवस्थामा फरक फरक व्यक्तिलाई साधारण सदस्यता दिइने निर्णय पनि साधारण सभाले गरेको छ।
शरद कोइराला/ उज्ज्वल ओझा
मानव सभ्यताको उद्गम नदीको किनारमा हुन्छ । सालीग्रामका लागि प्रख्यात काली गण्डकीको किनारमा आदिवासी कुमाल, दरै, बोटे जातिका व्यक्तिहरुको परापूर्व काल देखि बासस्थान रँहदै आएको छ।
दरै जाति नेपालको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा विशेष गरी सेती, मादी र काली नदिको किनारमा बास बस्छन्। तनहुँको मादी किनारमा बसोबास गर्ने दर्राईहरु माछाको खोजिमा नै काली नदि किनारमा पुगेका हुन् । काली किनार डेढगाउँ, पीपलटार, रामपुर, पुट्टार जस्ता स्थानमा दरै जातिको बाहुल्यता रहेको छ ।
डेढगाउँमा दरैको बसोबास कहिले देखि सुरु भयो भन्ने एकिन नभए अहिलेको सबैभन्दा पाको पुस्ताका अनुसार उन्का जीजुबाजेहरु तनहुँबाट डेढगाउँ आइपुगेका हुन् । एक पुस्ता र अर्को पुस्ता बीचको फरक २५ वर्षराख्दा दरैहरु डेढगाउँ आएको २ सय वर्षभन्दा बढी भएको देखिन्छ।
डेढगाउँमा अहिले पूर्वथर, पश्चिमथर र मुखीयाथरमा गरेर ५५ घरभन्दा बढी दरैहरु रहेका छन् र दरैको जनसंख्या चार सयको हारहारीमा छ। ५० वर्षअगाडि सम्म पनि डेढगाउँ फाटमा दरै बाहेक अन्य जातिको बसोबास थिएन।
"हामी युवक हुँदा यता त सब झाडी थियो" घर वरीपरि औंलाले देखाउँदै पश्चिमथरका बद्रिमान दरैले भन्नुभयो। काली टाइम्समा दरै जातिका बारेमा केही लेख्ने उद्देश्यले दशैँको भोलीपल्ट हामी पश्चिमथर पुगेका थियौँ। दरैको दशैँ सकिएकै थिएन। खोजेकै मान्छे भेट्न केही बेर कुर्नुपर्‍यो। उमेरले सत्तरी काटी सकेका बद्रीमानसँगको वार्ताको सुरु नै दशैंबाट भयो।
"हाम्रो जातलाई चाडबाड नै धेरै लाग्छ, त्यसैले पछाडि परियो" बद्रीमानले आफूले सुनेका, भोगका र देखेका कुरा हामीलाई सुनाउन थाल्नुभयो। बेला बेलामा हामीले कुनै कुरा बुझ्न नसके प्रश्न सोध्दै जाने गर्थ्यौं।
डेढगाउँलाई पहिले ३२ से र रकुवालाई ५ सय भनिन्थ्यो। डेढगाउँमा दरैहरुको ३२ घर भएकाले ३२ से भनिएको हो। बद्रीमानका अनुसार उहाँले थाहा पाउँदा सम्म डेढगाउँ फाँटमा काईडाँडे मुखीया र तिम्सीना परिवार मात्र हुनुहुन्थ्यो। अरु सब रकुवा र डेढगाउँकै कोटथर, बाहुनथरमा बस्नुहुन्थ्यो।
दरैहरु गाई बस्तु पाल्ने र माछा मार्ने काममा विशेष रुचि दिन्थे। उतिबेला डेढगाउँमा नहर नभएकाले घैया र मकै उनीहरुले उब्जाउ गर्थे। दरै जातिले मलका लागि गाई बस्तु पाल्थे। दूध घ्यू मा दरै जातिको रुचि थिएन। अलि अलि भएको घ्यू त्रिवेणी, बुटवल पुर्‍याएर बेच्ने र नुन, तेल, कपडा लिएर आउँथे दरैहरु।
दुई साताको लागि सामल बोकेर, बाख्रा, सुठो, अदुवा सहपुर सम्म लगेर बेचेको अनुभव बद्रीमानले सुनाउनुभयो। तीहारे औंशी र माघे सक्रान्ति दरै जातिको मुख्य पर्व हो। चाडबाडमा चेलीबेटी बोलाउने र पीतृलाई खुवाउने दरैहरुको विशेषता रहेको छ। दरै जातिले बनाउने मुना (जाँड), जाँडलाई महिनौं, वर्षौ राखेर बनाइने मनुवा अहिले पनि यस क्षेत्रमा निकै प्रचलित छ।
अतिथि सत्कारमा असाध्यै ध्यान दिने दराईहरु कोही पाहुना आए भने मुना र माछा- मासु खुवाउन पाउँदा खुशी हुन्छन्।
आफ्नै जातमा प्राय भागी विवाह गर्ने परम्परा दरै जातिमा रहेको छ। मागेर विवाह असाध्यै कम हुन्छ। विवाह भइसकेपछि छोरीलाई माइतिमा बोलाएर टिका दिने चलन यस जातिमा रहेको छ। यो जातिको आफ्नै पुजारी छैनन्। मर्दा पर्दा बाहुन ल्याएर चोखिने चलन दरै जातिको रहेको छ। दरै जातिमा विशेष गरी लोग्ने मानिसले पटुका वाँध्ने र महिलाले गुन्यु चोलो लगाउने चलन छ।
आफ्नै मातृभाषा भएका दरैहरु नाचगानमा रुचि राख्छन्। असोज देखि माघसम्म हरेक साँझ झाम्रेमा रम्न रुचाउने दरैहरु माघ देखि जेठसम्म कौरामा झुम्थे। "पुराना पुस्ताका दरैहरुले अध्ययनमा उति सारो रुचि राखेनन्, विहान देखि राति सम्म मुना खाएर बस्नेले के को पर्ढाईमा अगाडि बढ्थे र?" बद्रीमानले भन्नुभयो, "विगतमा राम्रो खेत बारी दरै जातिको भए पनि बाहुन, क्षेत्री, नेवारले जब्बरजस्ति गरेरै भए पनि किन्थे।"
डेढगाउँमा चरनको अभाव दरै जातिको लागि पीरको कुरा हो । विगतमा गैंडीया देखि बालीघाट सम्म चरन भए पनि अहिले मानिस भरिए पछि अप्ठेरो परेको बद्रीमानले अनुभव सुनाउनुभयो।
विगतमा डेढगाउँमा तिरो उठाउने काममा दरै जिम्वाल र मुखीया हुने भए पनि तिन्को लेखा पढी नहुँदा लेखापढी गर्ने बाहुन क्षेत्रीले आफूहरुलाई ठगेको अनुभव बद्रीमानले सुनाउनुभयो।
तर, विगतको जस्तो अवस्था अहिले भने छैन, डेढगाउँमै पनि १० जना भन्दा धेरै दरैहरुले एस एल सी उतिर्ण गरिसकेका छन्। "अब हामीलाई कसैले हेप्न सक्दैन" जुद्धबहादुर दरैले भन्नुभयो, "दरै भाषा र जातिको संरक्षणका लागि अब दरैको युवा पुस्ता नै सक्रिय हुनुपर्छ।"
निजी स्रोतका शिक्षकको पीडा
समान योग्यता भएकाहरुले उही समयमा एउटै काम गरेपछि सबैले बराबरी ज्याला पाउनु सामान्य सामाजिक न्याय हो। तर, नयाँ नेपालमा पनि विभेदको अन्त्य हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन। हामी सरह नै आई ए पास भएकाहरुले उही कक्षालाई उति नै पीरियड स्कूलमा पढाउँदा मासिक नौ हजार रुपैया तलब बुझ्छन् भने म लगायत केही सहकर्मीहरुले मासिक एक हजार सात सय रुपैयामा काम गरिरहेका छौं।
२०६३ माघ देखि डेढगाउँ उच्च मा. वी मा प्राथमिक कक्षामा अध्यापन गर्ने मलाई सुरुमा महिनाको एक हजार दुइ सय रुपैया दिइन्थ्यो। बीचमा अरु शिक्षकको तलब बढ्दा तीन सय रुपैया बढाएर पन्ध्र सय पुर्‍याइयो।
अहिले नयाँ बजेट आउँदा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले माथि देखि तल सम्म सबै कर्मचारीलाई महंगी एउटै हुन्छ भन्दै दुई देखि तीन हजार रुपैया सम्म बढाउनुभयो। तर हामी जस्ता स्थानीय स्रोतबाट अध्यापन गराइरहेका शिक्षक शिक्षिकाको लागि भने विद्यालयले भने महिनाको दुई सय रुपैया मात्र बढायो।
विगतमा गाविसले एक वर्षमा पाउने अनुदान १० लाख रुपैया मात्र भएकोमा अहिले बढेर ३० लाख रुपैया सम्म पुगेको छ। त्यस अनुपातमा स्थानीय स्रोतबाट अध्यापन गर्ने हामी शिक्षकको तलबमा पनि समयानुकल वृद्धिको माग गर्नु नाजायज हो जस्तो लाग्दैन। सम्वन्धित पक्षको यस तर्फ ध्यान जाओस्।
शिक्षक, डेढगाउँ उच्च माध्यमिक विद्यालय
सुख, सुविधा र सम्पन्नता मानवीय चाहाना हो। समय अनुसार सेवा र सुविधा नपाएको समाजले अन्यत्रको तुलनामा आफ्नो समाज पछाडि परेको अनुभूति गर्दछ। यस्तो अनूभूतिबाट असन्तोष, हीनताबोध र विद्रोहको भावना उत्पन्न हुन्छ। समय सापेक्ष समाजको विकास गर्न सचेत वर्गको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सचेत वर्ग बीचबाटै नेतृत्वको विकास हुन्छ।
नेतृत्वकर्ताले समाज विकासका लागि स्रोतसम्म पहुँच पुर्‍याउनु, सेवाग्राहीलाई प्रोत्साहित गर्नु र उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। जुन समाजका अग्रजले यी तथ्य माथि ध्यान पुर्‍याउँछन् त्यस क्षेत्र वा समाजका बासिन्दाले समय अनुसारको सुविधा प्राप्त गर्दछन्।
जुन समाजले पाउनु पर्ने ठाउँबाट उचित सेवा र सुविधा पाउँछ, त्यही ठाउँका बासिन्दा समृद्धि बन्दै जान्छन्। सम्पन्नता प्रतिष्ठाको मापदण्ड पनि हो। आफ्नो र समाजको प्रतिष्ठाको लागि निरन्तर प्रयत्न गर्ने व्यक्ति नै सचेत व्यक्ति हो।
सुगम नवलपरासी जिल्लाको उत्तर पूर्वी भाग विकट पहाडी धरातल भएको क्षेत्र हो। तीन दशक अगाडि पाल्पा जिल्लाबाट नवलपरासीमा गाभिएको यो क्षेत्र समय अनुसारको विकास पूर्वाधारबाट वञ्चित छ। हालसम्म पूर्वाधार विकासका लागि जे जति प्रयत्न भएका छन्, ती प्रयासहरु स्थानीय बासिन्दाले अनुभूति गर्ने तरिकाबाट भएको देखिदैंन। फिनेडाको सहयोगमा उपलब्ध खानेपानीका धाराहरु र एक्सन एड नेपालको एकिकृत सामुदायिक सेवाका अतिरिक्त जनताका मन छुने सेवा र सुविधा कतैबाट पनि उपलब्ध भएका छैनन्।
निकै कष्टका साथ निर्माण भएका टेक्टर चल्ने मौसमी बाटाहरको स्थिति चिन्ताजनक छ। यी बाटाहरुले त समस्या थपेका हुन् कि हल गरेका हुन् जस्तो भान परेको छ। अनिश्चित जोखिम र खर्च समेत बढाएको छ ।
यसैले निर्माण भएका मुख्य मार्गहरुको स्तरीकरण, ग्रामिण विद्युतिकरण, थप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उन्नत कृषि तथा पशुपालन, भू- क्षय नियन्त्रण लगायत जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम भरपर्दो र दीर्घकालिन रुपमा सञ्चालन नुहँदा यस क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तरमा अझै पनि ठूलो भिन्नता आउन सकेको छैन।
हाम्रा समस्याहरु केन्द्रसम्म अवगत गराउन र समाधानका लागि प्रयत्न नभएको पनि होइन। हाम्रो सर्वपक्षीय प्रयत्नबाटै यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि गैडाकोट देखि काली तिर हुँदै मुक्तिनाथसम्म मोटरमार्ग र दलदले देखि खैरनीटार जोड्ने मार्ग बीच काली गण्डकीमा पक्की पुल निर्माण जस्ता ज्यादै महत्वपूर्ण योजना परेका छन्। यी योजनाहरुको शिघ्र निर्माण र गुणस्तरका लागि हामी अझै खट्नु पनि आवश्यक छ।
सोचेजस्तो सेवा पाउन नसकिए पनि दूर संचारका लागि फोन सुविधा र सुरक्षा निकायको सेवा हामी कहाँ उपलब्ध भएको छ। उपलब्ध सेवाको स्तरीकृत र निरन्तरता एउटा पक्ष हो भने बाँकी सुविधाका लागि प्रयत्न अर्को पक्ष हो।
हाम्रा क्षेत्र विकट छ। वस्तिहरु छरिएको छ। सामाजिक सेवामा लागिरहने अगुवाहरुको पनि निजी समस्या हुनसक्दछ। देशमा अझै पनि राजनीतिक स्थिरता छैन। स्थानीय निकाय अपाङ्ग छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रा सवाललाई कसरी अगाडि लिएर जान सक्दछौ, भन्ने विषयमा सल्लाह र सहमतिको आवश्यकता अहिलेको टड्कारो विषय हो।
यतिबेला हामीले दुई वटा प्रमुख सबालमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। विकास निर्माण र त्यस्को अनुगमनका हामीले पहिलो ध्यान दिनुपर्ने छ भने भोलि बन्ने संविधानमा राज्य पुनसंरचना हुँदा लिन पर्ने र सकिने फाइदाको विषयमा पनि छलफल हुन जरुरी छ।
विकास निर्माण र भौतिक संरचना
२१ औं शताब्दिमा पनि समयमा मट्टीतेल नपाउँदा र किन्न नसक्ने हुँदा धेरैका घर आँगन अन्धकार छाएको छ। केही हुनेखानले सोलार वत्ति राखे पनि त्यो धेरैलाई इर्श्या बढाउने माध्यम बनेको छ। नवलपरासी जिल्लाका पहाडी क्षेत्र बाहेक अन्यत्र सबै विद्युतिकरणको उज्यालो छ। यो पहाडी क्षेत्रको विद्युतिकरण हामी सबैको चासोको विषय हुँदा सामुहिक प्रयत्न पहिलो प्राथमिकता हो।
यस्तै स्वास्थ्य, सिंचाई, शिक्षा जस्ता समस्याका लागि पनि तत्काल केही नगरी नहुने स्थिति छ। विकास निर्माणका लागि राज्यबाट भएको लगानी र स्रोत साधनको उचित व्यवस्था तथा अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा गुनासा, असन्तोष र द्वन्द्व समेत बढेको छ।
स्रोतसम्म पहुँच र पुनसंरचनामा ध्यान
राज्यबाट अधिकतम सेवा पाउन स्रोतसम्म पहुँच पुग्नैपर्छ। सेवादायी निकायहरु अपायक वा धेरै टाढा भएका व्यय भार र समयाभावको कारण स्रोतमा पहुँच कम पुग्दछ। जुन क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक स्थिति नाजुक छ, त्यही क्षेत्रका बासिन्दाले धेरै खर्च गरेर राज्यबाट पाउनुपर्ने सामान्य सेवा लिनुपर्दा गरिबी माथि झन् मार पर्दछ। नयाँ बन्ने संविधानमा क्षेत्रगत प्रशासानिक वा राजनीतिक संरचना बन्दा न्यूनतम सेवा नजिकैबाट उपलब्ध हुन सक्ने गरी इलाका प्रशासन कार्यालय, मालपोत, कृषि सिचाई, प्राविधिक, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता संरचनामा पहाडी क्षेत्र भित्रै व्यवस्था हुनुपर्ने मागका लागि हाम्रा साझा प्रयास हुनुपर्छ।
तनुहँको काली गण्डकीको गण्डकी बेशी र पूर्वी पाल्पाको छिमेकी बासिन्दाहरु बीच समेत अव बन्ने नया संरचना र हाम्रो सुविधाको विषयमा छलफल हुनुपर्छ।
राज्यको सेवा र सुविधा पुर्‍याउने निकायबाट हामी जति टाढा हुन्छौं, त्यति नै राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा र सुविधा पाउन पछि परिन्छ। हामी अगाडि जानु छ भने हामी पछाडि पर्‍यौं कि पार्‍यौं भनेर मात्र हुँदैन, त्यस्को कारण तर्फ ध्यान दिई समयमै सजग, सतर्क र सक्रीय हुन पनि आवश्यक छ। अत्यन्त महत्वपूर्ण यो समयमा हामी सबैको साझा हीत र सवालका लागि साझा प्रयत्न गरौं। हाम्रा राजनीति वा अन्य केही अन्तरविरोध र गुनासा भए थाति राखौं। आफ्नो क्षेत्रको गौरव र सम्वृद्धिका लागि जुटौं।